डा. केसीको पक्राउविरूद्ध बाबुराम र गगन थापा सडकमा उत्रने « News24 : Premium News Channel
डा. केसीको पक्राउविरूद्ध बाबुराम र गगन थापा सडकमा उत्रने
काठमाडौं,पुस २५ : डा. गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई सडकमा उत्रिने भएका छन् । मंगलबार बिहान ट्वीट गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्राईले बिहान ८ बजे डा. केसीको अभियानप्रति ऐक्यवद्धता जनाउन माइतीघरमा जाने जानकारी दिएका छन् ।
भट्टराईले डा. केसीप्रति ऐक्यवद्धता जनाउने सबैलाई माइतीघरमा उपस्थित हुन आग्रहसमेत गरेका छन् । सोमबार केसी पक्राउ पर्ने वित्तिकै पनि भट्टराईले मेडिकल शिक्षामा सुधार र स्वास्थ्य सेवामा सबैनेपालीको पहुँचको माग राखी संघर्षरत डा. केसी पक्राउ पर्दा दुःखी भएको भन्दै डा. केसीको अभियानको पक्षमा रहेको भन्दै ट्वीट गरेका थिए । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ ।